IGrenada ithatha indlela elumkileyo ngakumbi yokuvula kwakhona imida yayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeGrenada Breaking » IGrenada ithatha indlela elumkileyo ngakumbi yokuvula kwakhona imida yayo
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeGrenada Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Inkulumbuso yaseGrenada uGqirha Keith Mitchell
Inkulumbuso yaseGrenada uGqirha Keith Mitchell ubhengeze indlela elumke ngakumbi ekuvulweni kwakhona kwemida yelizwe. Kwintetho yakhe kwisizwe ngeCawe kaJuni 28, u-Nkulumbuso wathi ngeengxelo zemihla ngemihla zokunyuka kwamaqondo osulelo, ngakumbi e-US, eyona ndawo iphambili yentengiso yase-Grenada, amagosa aya kuqhubeka nokusebenza ekugqityweni kweeprotokholi phambi ilizwe liqala ukwamkela iinqwelomoya.
Inkulumbuso iqhubeke ngokuthi amagosa ezeMpilo avavanye kwaye avavanya iinkqubo ezenzelwe ukukhusela abemi kunye neendwendwe kwaye uninzi lweendawo zichongiwe ukuba ziphuculwe. Ke ngoko, kwikamva elingekude, iGrenada iya kuqhubeka nokwamkela iinqwelomoya ezihleliweyo phantsi kwemigaqo emiselweyo, ebandakanya ukuvavanywa ngaphambi kokuhamba, ukuvavanywa ekufikeni kunye nesivumelwano sokuthwala iindleko zokuvalelwa yedwa.
Ngokwenkokheli yase-Grenadian, uRhulumente waqesha Covid-19 IKomitana yeKomidi kulindeleke ukuba iqukumbele umsebenzi wayo ekupheleni kukaJulayi. Emva koko, ukuthatha isigqibo kukaRhulumente kwimicimbi efana neeprotocol, imigaqo, ukuvalelwa yedwa nokuvavanywa, kuya kukhokelwa yiKomiti yeSizwe yeeNgcebiso. Ukwakhiwa kwalo mzimba kuyakubhengezwa kamva.
Ukuza kuthi ga ngoku, iSebe lezeMpilo kunye neGrenada Tourism Authority (GTA) baqeqeshe ngaphezulu kwe-1500 yabachaphazelekayo kwezoKhenketho kwimigaqo-nkqubo emitsha yezempilo nokhuseleko kumzi mveliso; ukudala indlela entsha yokwenza ishishini. Omabini la maziko aya kuqhubeka nolu shishino lubalulekileyo loqeqesho ngokubanzi.
Okwangoku, uRhulumente waseGrenada ebesele enika amathuba ongezelelweyo kwimigaqo ye-COVID-19 yokuvumela amashishini amaninzi nangakumbi ukuba asebenze, ngokuhambelana nezikhokelo ezisekwe kumacandelo ngamacandelo. Ukusukela ngoLwesibini nge-30 kaJuni, abantu baseGrenadi bayakonwabela inkululeko eyandisiweyo yokuhamba yonke imihla, ukusuka nge-5 kusasa ukuya nge-11 ngokuhlwa ngelixa beqhubeka nokunxiba ubuso kunye nokuziqhelanisa noluntu. Ukongeza, iilwandle zivulelekile eluntwini ukusuka nge-5 kusasa-5 ngokuhlwa. IGrenada, iCarriacou kunye nePetite Martinique okwangoku azikho iimeko ezisebenzayo ze-COVID-19 (ukusukela nge-18 kaJuni) enamatyala angama-23 erekhodiweyo.
I-GTA ngokusungulwa kwayo kwephulo elitsha lezokhenketho lwasekhaya elibizwa ngokuba yiParadise eKhaya ngoLwesine we-25 kaJuni, 2020 ikhuthaza abantu bendawo ukuba bonwabele izibonelelo ezizodwa ezandiswe licandelo lendawo yokuhlala kwaye lincedise icandelo ukuba livavanye izikhokelo zalo ezitsha nezempilo.